Armati စိတ်တိုင်းကျ faucet
Armati စိတ်တိုင်းကျ faucet ဖြေရှင်းချက်
Armati အောက်ပါအားသာချက်များအားဖြင့်သူတို့ရဲ့မီးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်းများကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူဟိုတယ်စီမံကိန်းကို / အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုထောက်ပံ့ပေး:
62 finish ကိုရှေးခယျြမှုမြား၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး
အပြီးအစီးကိုအိမ်သာ, စည်ပိုင်း & ရေချိုးခန်းအဘို့အဖြေရှင်းချက်များနှင့်မီးဖိုချောင်
ရောထွေးနှင့်ပွဲစဉ် faucets, လက်ကိုင်, ရေချိုးခန်းနှင့်ချော
Armati faucet နှင့်အတူသင်၏ရွေးချယ်မှုအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြောင်း, သင့်ဒီဇိုင်းကိုလျှော့မသည်, သင့်ရဲ့ရူပါရုံသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။
1) ပထမအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာ / ဟိုတယ်ဒီဇိုင်နာ (client ကို) Armati အချို့သော faucet စိတ်ကူးသို့မဟုတ်ပုံကြမ်းများကိုစေခြင်းငှါ၎င်း, ငါတို့အင်ဂျင်နီယာသို့သူတို့ကိုငါ convert စေခြင်းငှါ ကွန်ပျူတာ format နဲ့။
2) .Engineer client ကိုရဲ့ဒီဇိုင်းအဘို့အဒစ်ဂျစ်တယ်ဆပ်စေရန်ဆက်လက်။
3) .Engineer ကိုရေလမ်းကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံဘို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမြင်ပေးဖို့, ပြည်တွင်းရေးဖွဲ့စည်းပုံမှာများအတွက် client ကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်။
4) ဖြင့် CAD ကျွန်တော်တို့ထုတ်ကုန်ဤနမူနာ CNC စက်ကို အသုံးပြု. စေခြင်းငှါ, အတည်ပြုခြင်းဆွဲ။
အထက် 10 နေ့မှစ.4ရက်သတ္တပတ်မှထုံးစံ faucet ဖြေရှင်းနည်း, ခဲအချိန်များအတွက်ယေဘုယျလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေဟာ, ဒီမေလသည်သင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်ကျွန်တော်ရှိသည်သောလက်ရှိမှို၏အခက်အခဲပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဒီဇိုင်းကနေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြာသေးမီကိစ္စတွင်သာ 45 ရက်ပတ်လုံးကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
ရှန်ကျန်း Hui ဟိုတယ်၌ခေတ်မီ5ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်, ဟိုတယ်ဒီဇိုင်နာတစ်မူထူးခြားသော faucet သူတို့ရဲ့ rectangular ဟိုတယ်လိုဂို fit ချင်သည်။
ကျွန်တော်တစ်ဦးတစ်ခုတည်းသောဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုတည်း level ကိုဒီဇိုင်းနှင့်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပြည့်မီဖို့မျိုးတွင်။
အဲဒီမှာ 88 အခန်းပေါင်းဒီဇိမ်ခံဟိုတယ်၌ရှိ၏, ထိုထုံးစံ faucet ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။